यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्छौं, अर्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बीपीको सरकार बन्छ
classickhabar २०७४ मङ्सिर ८ शुक्रबार प्रकाशित
सुशिलमान शेरचन, महामन्त्री, नपाली कांग्रेस बीपी ,
नेपाली कांग्रेस बीपीको आवश्यक्ताबोध किन गर्नुभयो ?
बीपीले २००३ सालमा निर्माण गरेको पार्टी हो नेपली कांग्रेस । यो विपी लगायत गणेशमान सिहं,कृष्णप्रसाद भट्टराई ,दिवानसिह राई, योगेन्द्रमान शेरचन,सिके प्रसाई, सुवर्ण शमशेर, मिनबहादुर गुरुङ, बखानसिंह गुरुङ लगायतका अन्य नेताहरुले निर्माण गरेको पार्टी हो । विपीको समाजवादको सिद्वान्तलाई आज नेपाली कांग्रेस पार्टीले बिस्र्यो । यसकारण हामी जस्ता धेरै साथीहरुले पार्टीका नेताहरुसमक्ष प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद सम्बन्धि पार्टीमा विचलन देखा परेको सबन्धमा अनेकौ पटक ध्यानाकर्षण गरायौं । तर आजका मै हुं भन्ने नेताहरुले सुन्न चाहेन । र गुट उपगुट र भ्रष्टाचारमा व्यस्त भए । हिजोका दिनहरुमा हेर्दा जहातही नेपाली कांग्रेस नै कांग्रेस देखिन्थ्यो । हिजो मेचीको कांग्रेसलाई दुख्दा महाकालीको कांग्रेसलाई दुख्थ्यो, आज एउटा कांग्रेसलाई दुख्दा अर्को कांग्रेस हाँस्छ, कांग्रेस अव कांग्रेस रहेन । कांग्रेस देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेस, कोइराला कांग्रेस, निधी कांग्रेस, खड्का कांग्रेस आदि जस्ता उपगुटहरुमा विभक्त भयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह ,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका अन्य नेताहरुलाई हेर्दा वा देख्दा प्रत्येक कांग्रेसको शिर ठाडो हुन्थ्यो भने आजका कांग्रेसका नेताहरुलाई हेर्दा प्रत्येक कांग्रेसको शिर झुक्छ । त्यसैले हामीले नेपाली कांग्रेस बीपीको स्थापना गरेका हौं । हामीहरुले बीपीले परिकल्पना गर्नुभएको कांग्रेस निर्माणका खातिर नेपली कांग्रेस बीपी गठन गरेका हौं जसको नेतृत्व बीपी, गणेशमानजी र किसुनजीको स्कुलिङमा हुर्किनुभएका सन्त नेता हरिबोल भट्टराईले गर्नुभएको छ ।
तपाईहरु पार्टीभित्रको अन्र्तसंघर्षमा हारेर त होइन नयां दल गठन गर्नुभएको ?
अहिलेको नेपाली कांग्रेस बीपी ले बनाउन खोज्नुभएको कांग्रेस नै रहेन । उहांको जुन सिद्वान्त थियो, यसलाई त्यागेर सवै नेताहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भए । समाजवादका लागी जुन सिद्दान्त लिएर अगाडि गएका थियौ त्यो नै सुन्न चाहेनन । उनीहरुरुको हिजोको त्याग तपस्या गुटको लागि भयो । कसरी सत्तामा टिक्ने , सत्तामा जाने , कसरी आफ्नो गुटकालाई मात्रै मन्त्री बनाउने अनि राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने उनीहरु त्यसैमा मात्रै केन्द्रित रहे । र यी नेताहरुको विचारसंग असहमत रहेका नेपाली कांग्रेसका अन्य मित्रहरुलाई सिद्दयाउने काममा व्यस्त रहे । आज नेपाली कांग्रेसमा लेवलले मात्र काम गरेको छ । त्यसकारण पनि हामी नेपाली कांग्रेस संरक्षण गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस बीपी गठन गरि प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको संरक्षण गरि सो अन्र्तगत भोलीका दिनहरुमा राष्ट्रनिर्माणमा पुरा समय खर्च गरिने छ । स्थानीय निर्वाचन र वर्तमान निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका कतिपय साथीहरु विकल्प नभएकाले माओवादी र एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका साथीहरुले हामीलाई निर्वाचनपछि विपी कांग्रेसमा आउछौ भन्नुभएको छ । आज धेरै पार्टीका इमान्दार, पुराना जनप्रिय साथीहरुको भनाईमा स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले यो पार्टी गठन भएको भए उत्तम हुन्थ्यो भनिरहनु भएको छ । अव ढिलै भएपनि छोरा जन्मिएको छ, अव यसलाई सहि कांग्रेस बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सवैले दृढंसकल्प गरेका छौं । निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस बीपीमा आउछौ भनेर देशभरवाट नेपाली कांग्रेसमा रहेका साथीहरुले भनिरहनुभएको छ भने अर्कातिर विकल्पको अभावमा बाध्यताले एमाले र माओवादीमा जानुभएका कांग्रेसका पुराना साथीहरु नेपाली कांग्रेस विपीमा आउने कुरा गरिराख्नुभएको छ ।
तर विपी कांग्रेस गठन हुदा जुन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा सन्देश प्रवाह हुनुपथ्र्यो, अर्थात जुन माहौल सिर्जना हुनुपर्ने , त्यो त हुन सकेन ? कांग्रेस भित्रका खास मान्छेहरु ल्याउन सक्नुभएन नि ?
त्यो समयले देखाउंछ । समयले नेपाली कांग्रेसको ठाउंमा नेपाली कांग्रेस विपीलाई पुर्याउछ । नेपाली कांग्रेस बीपीलाई नै वास्तविक कांग्रेस पार्टीको रुपमा आम मेचीमहाकालीका कांग्रेसजनहरुको भनाईमा रहेको हामीले पायौं । जहांसम्म, तपाईको भनाईअनुसार राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाली कांग्रेस बीपीको घोषण गर्दा खेरि त्यतिवेला मुलुकमा चाडबपर्वको उत्सव थियो । लक्ष्मीपुजाको बेलामा घोषणा गरिएकोले देशका सबै जनसमुदायहरु चाडवाडमा व्यस्त भएका कारणवश प्रचारात्मक हुन नसकेको हो । साथैयस पार्टीको घोषणा भएको सन्देश गाउंगाउं, जिल्ला जिल्लाहरुमा पुर्याउने बेलामा संचार क्षेत्रका साथीहरु पनि चाडबाडमा व्यस्त हुुनुहुन्थ्यो । तसर्थ शुभेच्छुक, समर्थक कति साथीहरुले हामीलाई खवर भएन, खवर भएको भए हामी पनि सहभागी हुन्थ्यौ भनेर भन्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस बीपीमा कस्ता व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ ?
केहि पूवं सांसद छन्, केहि पूवं मन्त्री छन् । अध्यक्ष हरिबोल भट्टराई जस्ता त्यागी सन्त नेता यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीमा प्रजातन्त्रका लागि धेरै त्याग तपस्या गरेका साथी छन् , राजनीतिलाई आदर्श, निष्ठा ठान्ने साथीहरु छन् । आज नेपाली कांग्रेस पार्टीमा रहेका साथीहरु दास , नेताहरुको ऋणि भएका छन् । अव साथीहरुलाई नेपाली कांग्रेसमा विपीमा स्वागत गरि आफै नेता आफै कार्यकर्ता बनि प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद गाउंगाउंसम्म पुर्याउने र भोलिका दिनमा वामगठबन्धनसंग आगामी निर्वाचनहरुमा जनताको विश्वास लिई नेपली कांग्रेस बीपीले टक्कर दिने छ । सामूहिक नेतृत्वमा हामी चल्छौं । देश बचाआँै, प्रजातन्त्र बचाऔं,समाजवाद लागु गरौं, हामी नेपाली कांग्रेस विपीको तर्फवाट आमजनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छौं ।
नेपाली कांग्रेस बीपी, बीपीकै नाममा किन गठन गर्नुभयो , गणेशमान, सुर्वणशमशेर, किसुनजी लगायतको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा स्थापनामा महत्वपूर्ण योग्दान छ नि ?
नेपाली कांग्रेसको जन्मदाता, मूल जरानै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भएको हुनाले यस नयां पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस बीपी रहन गएको हो । तसर्थ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाम जहां रहन्छ त्यहां सर्वमान्य नेता गणेशमान सिहं, बौद्विक एवं चतुर नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, योगेन्द्रमान शेरचन, सिके प्रसाई ,देवानसिहं राई, मिन बहादुर गुरुङ, बखानसिंह गुरुङ, शेर बहादुर शेरचन जस्ता आदरणीय नेताहरु पनि संगै रहनुहुनेछ ।
नयां पार्टी खोल्ने तर कालान्तरमा ति पार्टीहरु टिक्न नसकेर पुरानौ पार्टीमा बिलय भएको या फर्केको देखिएको छ, तपाईहरुको हकमा के हुन्छ ? जस्तै भोली नेपाली कांग्रेस सच्चियो भने तपाईहरु फेरि फर्कनुहुन्छ कांग्रेसमै ?
कांग्रेसका कुन नेता सच्चिन सक्छ तपाई भन्नुस ? देउवा ? पौडेल ? कोइराला, सिटौला, निधी, महत , केसी, खड्का यी नाम चलेका नेताहरु भविष्यमा सचिएलान ? सच्चिने केहि संकेत देख्नुहुन्छ ? मलाई त लाग्दैन । मैले अगाडि पनि निबेदन गरिसके कि कांग्रेस अव कांग्रेस रहेन । सच्चिनै नसक्ने गरि कांग्रेस हरेक ठाउंमा विचलित भएको छ । कहां विचलित भयो भन्दा पनि कहां भएन भन्ने प्रश्न गर्नुस न ? आज विपीको बारेमा कुन नेपाली युवायुवतीहरुलाई, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमानजी, किसुनजी आदि नेताहरुको बारेमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि गरिएका योग्दान बलिदानका सम्बन्धमा के थाहा छ ? के बुझेका छन् ? तसर्थ न कांग्रेस सच्चिन सक्छ न हामी कांग्रेसमा फर्कन सक्छौं । बरु नेपाली कांग्रेसमा रहेका तमाम विपि, गणेशमान , किसुनजी लगायतका युगपुरुषहरुको आदर्शलाई मान्ने साथीहरु नेपाली कांग्रेस बीपीमा लामवद्व हुन लालयित हुनुभएको छ, हुनुहुनेछ ।
यसको मतलव तपाई राजसंस्था फर्काउनपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
हामीलाई संवैधानिक राजसंस्था फर्कदा आपत्ति छैन तर हामी सडकमा गएर राजा आउं देश बचाउं भनेर आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौ । जहांसम्मको धर्म निरपेक्षताको सवाल छ, हामी सवै धर्मलाई सम्मान गर्दे स्वतन्त्र सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा छौं । धर्मको विषयमा हामी जनताको विचमा लगेर जनमतसंग्रहद्वारा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।
पार्टी कसरी चलाउनुहुन्छ, खर्च कसरी धान्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस विपी, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराइ जस्ता इतिहास पुरुषहरुले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका विषयमा जुन शिक्षा दिनुभएको छ ,हामी त्यसैलाई अनुशरण गरेर अगाडि बढ्छौं । हामी आफ्नै स्रोत तयार गर्छौ । आय स्रोत कसरी हुन सक्छ , त्यसका लागि हामी सोच्छौं । हामी पैसाका लागि दक्षिण, उत्तर र पश्चिमसंग झुक्दैनौं । दल चलाउनकै लागि हामी बिक्दैनांै । हामी दुखसुख आफ्नै आर्यआर्जनवाट चलाउंछौ । देशभरका नेता कार्यकर्ता साथी, समर्थक, शुभेच्छुकको सहयोगवाटै हामी चलाउछौं । हामी धन,डन र गनमा विश्वास गर्देनांै । नेपाली कांग्रेस बीपीले डन र धन भएको मान्छेलााई न पार्टीमा प्रवेश गराउंछ न निर्वाचनमा टिकट नै दिन्छ । नेपाली कांग्रेस बीपी संसद जस्तो गरिमामय सभामा राजनीतिक, वैचारिक एवं दक्ष व्यक्तित्वहरु जाओस भन्ने चाहान्छौं जसका कारणले देशका कानूनहरु निर्माण गर्ने क्रममा उहांहरुको बौदिकत्व सदुपयोग होस । र नेपाल सरकार निार्मण गर्ने क्रममा असल, इमान्दार, जनप्रिय व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा निर्माण हुने सरकारले नै देशको सम्पूर्ण समस्या हल गर्न सकोस ।
तपाई शहिद योगेन्द्रमान शेरचनको छोरा हुनुहुन्छ, उहांप्रति राज्य किन उदासिन देखिन्छ ?
मैले राज्य होइन, पार्टी चुकेको भन्छु । ०४६ पछि अधिकांश समय सत्तामा बसेको कांग्रेस चुकेको हो । सहि मार्गमा हिडेको भए उहांहरु जस्ता योद्दाहरुको गणना हुन्थ्यो होला । योगेन्द्रमान शेरचनजस्ता प्रजातान्त्रिक योद्दाको बलिदानबाट नै कांग्रेस पटक पटक सत्तासिन हुन मद्दत पुग्यो । तर आजका नेताहरुले यी योद्दाहरुको बलिदान, त्याग, निष्ठालाई विर्सि सत्ता केवल शक्ति प्राप्त गर्नको लागि र आफ्ना दासहरु एवं परिवारलाई सत्ताको दुरपयोग गर्ने माध्यम बनाई पार्टीको संगठन विस्तार नगर्नु तर सत्ता प्राप्त गरि सत्ताको आडमा देशभरि निर्वाचनमा शक्ति दुरपयोग गरि संसदमा बहुमत ल्याएर फेरि सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम बनाए । तसर्थ योगेन्द्रमान शेरचन जस्ता योद्दाहरुको त्याग, बलिदानको नेपाली कांग्रेस पार्टीले अपमान गरेको छ । प्रतिबन्धित अवस्थामा नेपली कांग्रेसको नेताहरु बनारसमा बस्दा नेपालमा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्ने जिम्मेवारी योगेन्द्रमान शेरचनकै थियो । योगन्द्रमान शेरचन त्त्कालिन अवस्थामा पार्टीको फाइनान्सर समेत हुनुहन्थियो । र कांग्रेसको ब्रेन पनि उहां नै हुनुहुन्थयो । बीपीले भन्नुभएको थियो उहांहरुको ८ वर्षको सुन्दरीजल बसाईमा योगन्द्रमान शेरचन लिभिङ इन्साइक्लोपिडियो हो । मलाई केहि कुरा सोध्नुपर्छ भने योगन्द्रमान शेरचनलाई सोध्छु भन्नु हुन्थ्यो । कुनै ज्ञान नभएको कुरा छैन । योगेन्द्रमान शेरचन गणेशमानसिंहको शिक्षक पनि हो । सुन्दरीजलमा संगै ८ बर्ष वस्दा गणेशमान सिंहलाई पढाएको हो । उहांले रामनारायण मिश्रलाई हिन्दी पढाए । साथै अन्य नेताहरुलाई पनि त्यही जेलमा पढाए । तर कांग्रेसले आज किन विस्र्योे योगेन्द्रमान लगायतका योद्दालाई ? विपीको, गणेशमानको, किसुनजीसको सपना के थियो होला , उनीहरुको सपनालाई आजको कांग्रेसले पुरा गर्नतिर लागेका छन् ? उनीहरुवाट त्यो सम्भव छैन, त्यसकारण हामी नेपाली कांग्रेस बीपीको गठन गरेका हौं । तसर्थ धेरै पटक निर्वाचनहरुमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई मतदान गरे । यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको विपीको करुवा चिन्हमा मत दिएर राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिन म हार्दिक अपिल नेपाली दाजुभाइ दिदीवहिनीहरुमा गर्दछु । जनताको सपना, बीपीको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको यात्रा पुरा गर्नको लागि बहुमत दिई सरकारमा जानका लागि पूर्ण फेरि ५ वर्षभित्र तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित हुनेछौं । यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी अर्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बीपीको सरकार ।